Ciidamada JWXO oo cashar u dhigay ciidanka Woyanaha ee Ogadenia kusugan. | ogaden24
Ciidamada JWXO oo cashar u dhigay ciidanka Woyanaha ee Ogadenia kusugan.
Nov 26, 2016 - Aragtiyood
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ayaa sheegayo dagaallo aad uculus oo dhex maray Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo kuwa Gumaysiga Itoobiya.
Warkan oo aan kahelay wariyaha Wakaalada Wararka Ogadenia (ONA) ee xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa sheegaya in dagaaladan ciidanka Wayaanaha lagaga dilay saraakiil iyo askar badan waxayna dagaaladu udhaceen sidan.
22/11/16 Xawlay oo Dagmada Dhuxun ee Gobolka Nogob katirsan dagaal CWXO iyo kuwa wayaanaha ku dhex maray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 5 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
23/11/16 Abeesalay oo Dagmada Garbo ee Gobolka Nogob katirsan dagaal culus oo CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhex maray waxaa qudha lagaga jaray 13 kamid ah askarta wayaanaha 18 kalana waa lagaga dhaawacay.
24/11/16 Shiniile oo Dagmada Qabridahare ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal faraha laysula tagay oo ciidanka xooga dalka Ogadenia iyo kuwa cadawga ku dhex maray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 9 askari 13 kalana waa lagaga dhaawacay.